အိုင်တီခဲ့ဘူးပုံရှုပ်ထွေးတဲ့ကွန်ယက် - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်: PERCENT DIGITAL 100 ရိုက်ထုတ် FROM မှ
Home » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » audio » ကွန်ယက်အိုင်တီခဲ့ဘူးပုံရှုပ်ထွေးတဲ့, print FROM မှ PERCENT DIGITAL 100 TO သို့
Jermaine Harrell, ဗီဒီယိုအိုင်တီစစ်ဆင်ရေး၏မန်နေဂျာ Complex ကွန်ယက်
2002 အတွက်နုပျိုလူကြီးများအတွက်လူကြိုက်များလမ်းပေါ်မှာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းကိုသတင်းနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ထံအပ်နှံနေတဲ့ပုံနှိပ်မဂ္ဂဇင်းအဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ရှုပ်ထွေးသောကွန်ယက် အဲဒီအစောပိုင်းရက်အတွင်းကတည်းကအတော်လေးအသွင်ပြောင်းခံခဲ့သည်။ 2007 မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းရောက်ရှိနေအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစတင်ခဲ့ပြီးနှင့် 2011 အသုံးပြုပုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ခြမ်းချင်းစီတစ်လထက် ပို. 50 သန်းထူးခြားတဲ့ဧည့်သည်များနှင့်အတူ 25 ဝက်ဘ်ဆိုက်များထက်ပိုမိုထည့်သွင်းရန်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ယနေ့အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက်; ကျနော်တို့တသမတ်တည်းဆုရမူရင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုခင်းကျင်းထုတ်လွှင့်ကြေကွဲ-News Feeds နဲ့အွန်လိုင်းလိုင်းများ updated ပါပြီ။
နှုတ်ဆက်ပါတယ်ပရင့်ထုတ်ရန်, HELLO DIGITAL
နောက်ကျောကိုရှာဖွေနေစဉ်, ဒါကြောင့်အချိန်နှင့်တူသဖြင့်ပျံသန်းခံစားရပေမယ့်အဖြစ်မှန်ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ကို ယူ. , သွေး, ချွေး, ကြှနျုပျတို့ယနေ့များမှာဘယ်မှာရဖို့မျက်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်ကနေဒစ်ဂျစ်တယ်ဖို့အကူးအပြောင်းတစ်လျှောက်လုံးကျွန်တော်အစဉ်မပြတ်လူ့နှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှစ်ဖက်အပေါ်ကိုယျ့ကိုယျကိုနှစ်ဦးစလုံး reinventing ဖြစ်. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမဟာဗျူဟာပြောင်းလဲမှုများတွေအများကြီးသွားလာဆိုလိုသညျ။
ထုတ်ဝေဘက်မှာအဆိုပါအကူးအပြောင်းလွယ်ကူပါတယ်ရှိ၏ တကယ်တော့, မဂ္ဂဇင်းရဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်စာရေးဆရာများအများကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူနေဆဲယနေ့ဖြစ်ကြ၏။ အမှုအရာများ၏နည်းပညာပိုင်းအခြမ်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကျနော်တို့သို့ကိုယျ့ကိုယျကိုရတဲ့ခဲ့ကြသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စိုက်ပျိုးကြရန်အဘို့အနိုင်ရေးအတွက်ကျနော်တို့အချိန်တွင်ကျွန်မတို့ရဲ့လက်ရှိနည်းပညာ re-အကဲဖြတ်သည့်ရှုခင်းခဲ့ရသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ပုံနှိပ်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောစိန်ခေါ်မှုများလက်ဆောင်နှင့်ကျွန်တော် Higher-resolution ကိုကို formats နှင့်ပလက်ဖောင်း၏ပိုကြီးတဲ့အမျိုးမျိုးကျော်ပိုပြီးအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်အဖြစ်ကျနော်တို့လုပ်ငန်းအသွားအလာဘက်မှာအများကြီး သာ. ကြီးမြတ်တောင်းဆိုချက်များကိုကြုံတွေ့။ ကျနော်တို့မီဒီယာထုတ်လုပ်မှုပိုမိုမြင့်မား throughput နှင့်အကျိုးရှိစွာ shared သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာများပေးဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အစောပိုင်းမျိုးဆက် NAS system install လုပ်ခြင်း။ ထုတ်လုပ်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်ကံမကောင်းစွာသို့သော်ဒီဖြေရှင်းနည်းလျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်းအရာအများစုသောဗီဒီယိုဖြစ်လာခဲ့သည်အထူးသဖြင့်အဖြစ်မျိုးစုံစီမံကိန်းများနှင့် Higher-resolution ကိုကို formats ပေါ်တွင်အလုပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့လည်းဆင်းရဲသားကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ shared သိုလှောင်မှုစနစ်ကလိုအပ်သောစံပြ resolution ကိုတဝက်ဖို့တစ်ဦးတည်းသာ-သုံးလပတ်မှာအလုပ်လုပ်ရနျကြှနျုပျတို့၏အသင်းများကိုကန့်သတ်။ ရလဒ်အဖြစ်အယ်ဒီတာများ throughput တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏စက်အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရဖို့ပြင်ပ hard drives တွေကိုသုံးပြီးခဲ့ကြသည်။ ဤသည် Workflows ကြားဖြတ်နှင့်ယေဘုယျထိရောက်မှုအကျိုးသက်ရောက်ပါ။
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကြီးထွားခြင်းနှင့် 4K နှင့်တစ်ဦးမျှဝေအလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Higher-resolution ကိုအကြောင်းအရာထောကျပံ့ပေးနိုငျသောမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကဗီဒီယိုအလုပ်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲashared သိုလှောင်မှုစနစ်က - ဒါဟာကျနော်တို့ပိုကောင်းတဲ့ဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရှည်လျားကျွန်တော်တို့ကို ယူ. မသွားခဲ့ပါဘူး။
ငါသိုလှောင်မှုစနစ်အအခြားနည်းလမ်းသို့သုတေသနတွေအများကြီးလုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းင်, ငါသည်အဘို့အ Las Vegas မှာသွားရောက် NAB ပြရန် သော့ချက်ရောင်းချသူအချို့နှင့်တွေ့ဆုံရန်။ ကျွန်မအကြောင်းကိုဖတ်ပါဖူး ကွမ်တမ် တခြားပလက်ဖောင်းအတူလုပ်ကိုင်အပြင် Xsan (Mac OS နဲ့) နဲ့ StorNext ရဲ့အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ, နှင့်ကို system ရဲ့မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိရောက်သောဖိုင်ခွဲဝေမှုစွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွအေနေအဘို့အအရှိဆုံးအသုံးဝင်သောရွေးချယ်စရာတစ်ဦးအဖြစ်ထွက်ရပ်နေ၏။ မီဒီယာလောကမှာရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးအမည်များတချို့ - ငါသည်လည်းပြီးသား, ဤစနစ်များကို အသုံးပြု. ခဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့တန်းစီဇယားနှင့်အတူသဘောကျခဲ့ပါသည်။
ကျနော်တို့၏ 500 TBS နှင့်အတူတစ်လျှောက် StorNext-based Xcellis®လုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှုစနစ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကွမ်တမ် QXS-5000 စီးရီး RAID Array ကို။ အဆိုပါ StorNext-based ဖြေရှင်းချက်ကျွန်တော်ခေတ်ဟောင်း၏စိန်ခေါ်မှုများကိုကျော်လွှားပြီးအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုအနာဂတ်မှာရိုက်ထည့်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအရာကိုပေးအပ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုကြွယ်ဝသောမီဒီယာနှင့်အခြားဒေတာများကို-intensive ပမာဏများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ high-performance ကို shared သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင် ပေး. မျိုးစုံသိုလှောင်မှုအလွှာ span နိုငျသောအသုံးပြုသူများဘုံအကြောင်းအရာ access ကိုမျှဝေပေးမူဝါဒမောင်းနှင်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အမြန်ဆုံး streaming များဖိုင်ကိုစနစ်, ပေါင်းစပ် နှင့်တည်နေရာအပါအဝင် disk ကို, တိပ်ခွေများနှင့်မိုဃ်းတိမ်။
ပြီးနောက် ကွမ်တမ် ဟိုက်ဘရစ်သိုလှောင်မှု Array ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ဆုံးအပေါင်းတို့နှင့် HDD, ရှိသမျှ SSD ကို, ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုပေါင်းစပ်အပါအဝင်တစ်ခုတည်းခင်းကျင်းအတွက်သိုလှောင်မှုအမျိုးအစားများကိုပေါင်းစပ်ပေးခွငျးအားဖွငျ့အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးသည်။ အဆိုပါစစ်ခင်းကျင်းဆော့ဖ်ဝဲ access ကိုပုံစံများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အလိုအလျှောက်အမြန်ဆုံးအလတ်စားမှအများဆုံးတက်ကြွစွာဖိုင်တွေလှုံ့ဆျောပေးကတည်းကလည်းပြုလုပ်စီမံခန့်ခွဲရန်လွယ်ကူသည်။
အရပ်ဌာန၌စနစ်သစ်နှင့်အတူ, 16 အယ်ဒီတာများက high-performance ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက် shared သိုလှောင်မှုမှတိုက်ရိုက် Fiber Channel ကိုလက်လှမ်းရှိသည်, အကြမ်းဖျင်း 40 ပိုပြီး StorNext တံခါးပေါက်ကရိယာအသုံးပြုထားသော Ethernet ကျော် shared အတူတူသိုလှောင်မှုမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ အသစ်ကကွန်ယက်ကိုအထူးသသာမီဒီယာအလုပျအတှကျဒီဇိုင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြန်ဖွင်အဖြစ်အောက်ပိုင်း-performance ကိုတာဝန်များကိုအတှကျအသုံးပွုဝင်ရောက်နိုင်ပါသည် LAN access ကို, စိတျအပိုငျး၌, စနစ်ဟောင်းထက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပေးစွမ်းသည် - ထိုကော်ပိုရိတ် Ethernet ကနေခွဲထုတ်။
ဟာသူ့ရဲ့အင်ပါယာ FOR တည်ဆောက်ရေးအတွက်အုတ်မြစ်ချ
ကျနော်တို့မူလတန်းအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်အထီးကျန်မှုတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ငါးခုကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့များရှိသည်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာများ၏တစ်ဦးချင်းစီတူညီဖိုင်များကိုတိုက်ရိုက် access ကိုရှိပါတယ်။ တစ်ခုတည်း, shared သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်သည်အလွန်တိုးတက်လာထိရောက်မှုဘို့ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း, ဖြေရှင်းချက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာများကိုတိုက်ရိုက်အပြည့်အဝဇာတိ 4K အတွက်အမြင့်မားဆုံး-resolution ကိုအကြောင်းအရာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး, ကိုစီမံခန့်ခွဲတည်းဖြတ်, ထုတ်လုပ်ရန်, ကြှနျုပျတို့ယခင်ကသာအိပ်မက်မက်ချင်ပါတယ်နည်းလမ်းများ၌အကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာကိုဖြန့်ဝေခွင့်ပြု, အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုများစွာသောလူကိုပေါင်းစပ်ဖို့တံခါးကိုကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ပါပြီ - ငါတို့သည်ဖြစ်လာကြပါပြီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်မီဒီယာအင်ပါယာ၏တိုးတက်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့လိုအပ်တဲ့သင့်လျော်သောနည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦမှထွက်တည်ဆောက်ရန်ထားတဲ့အပေါ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်။
Jermaine Harrell တစ်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာများ, စနစ်များနှင့်စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုအတှေ့အကွုံထက်ပို 15 နှစ်ပေါင်းအတူအိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ် seasoned ဖြစ်ပါတယ်။ Jermaine လက်ရှိသူတစ်ဦးအလျှင်အမြန်ကြီးထွားလာလုပ်ငန်းပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာဖြေရှင်းချက်အထူးဘယ်မှာ Complex ကွန်ရက်မှာဗီဒီယိုအိုင်တီစစ်ဆင်ရေး၏ Manager ကဖြစ်ပါတယ်။
အယ်ဒီတာ + Colorist - သြဂုတ်လ 22, 2019
အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများအတွက်အလုပ်သင် - သြဂုတ်လ 22, 2019
ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် - သြဂုတ်လ 22, 2019
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-02-04
ယခင်: IDC မှ: ရုပ်ရှင်ရုံအသံလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ထူးချွန်ကုန်ပစ္စည်းဆုချီးမြှင့်သည်ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးလက်ငင်းဆွေးနွေးပွဲ Cleaner
IFTA ပြီးတော့အခြား Movie, စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့များအွန်လိုင်းပင်လယ်ဓားပြရပ်ဆိုင်းလိုက်ခုနှစ်တွင်အစိုးရကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးကိုရှာ
JDI @ အငယ်တန်းဒီဇိုင်နာ